Faham sifooyinka ugu muhiimsan ee Bachelor-ka iyo fursadaha ay bixiso; Tan, waxaa mahada iska leh marqaatiyada ardayda, macalimiinta iyo kooxaha taageera ardayda inta ay waxbarashadooda ku jiraan.
Doorashada Bachelor-ka saxda ah
Isku habbee sida ugu macquulsan oo hagaaji habkaaga si aad ugu guulaysato imtixaanada gelitaanka iyo/ama waraysiyada.
Si fiican u kala saar farqiga u dhexeeya barnaamijyada dugsiga ganacsiga iyo koorasyada kale ee caadiga ah ee jaamacadda, si qof kastaa u helo booskiisa marka la eego mashaariicda tababarka.
Koorsadan, oo ay bixiyaan ESCP Business School iyo SKEMA Business School, waxaa loogu talagalay dhammaan ardayda la yaaban inay ka go'an tahay Bachelor, iyadoon loo eegin takhasuska.
Sida arday badan oo doorta Bachelor-ka si ay u sii wataan waxbarashadooda shahaadada jaamacadeed ka dib, waxaad ogaan doontaa sifooyinkeeda, hababka gelitaanka iyo heerarka looga baahan yahay gelitaanka iyo sidoo kale fursadaha waxbarasho dheeraad ah iyo xirfado aad diyaar u tahay. .
MOOC-gan ayaa kaa caawin doona inaad geliso dhammaan hantida dhinacaaga si aad ugu guulaysato gelitaankaaga Bachelor-ka.
Bachelor-ka waa la heli karaa dhammaan; kaliya waxaad u baahan tahay inaad dhiirigeliso oo aad wax ka ogaato.
Bachelors of Business Schools Diisambar 13, 2021Tranquillus
READ Xirmooyinka xiriirka luqadda Czech
horeLaga soo bilaabo Diyaarinta ilaa Dugsiyada Ganacsiga: koorsada saxda ah ee aniga?
socdaBaro wax ku saabsan baridda Sayniska Dijital ah iyo Tignoolajiyada